မလေးရှား UNHCR ရုံးဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမူ အကျင့်တွေကလဲ ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ် ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူတွေကို လူသားတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဆက်ဆံမှု မျိုးတော့ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeမလေးရှား UNHCR ရုံးဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမူ အကျင့်တွေကလဲ ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ် ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူတွေကို လူသားတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဆက်ဆံမှု မျိုးတော့ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
မလေးရှား UNHCR ရုံးဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမူ အကျင့်တွေကလဲ ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ် ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူတွေကို လူသားတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဆက်ဆံမှု မျိုးတော့ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
August 4, 2017 drkokogyi
ဒီလို ပေါက်လွှတ်ပဲစားအမိန့်တွေ မြန်မာပြည် တနံတလျား မှာ ထုတ်နေကြတယ်
မွတ်စလင်မဝင်ရ/မနေရ တဲ့ရွာတွေ တနေ့တခြားတိုးလာ
မိတ္ထီလာမှာဆိုရင် ဒုက္ခသယ်စခန်းတွေထဲမှာ နေကြရတုန်း
ဘာသာရေးဝတ်ပြု ဆောင်တွေ ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မှု/ပိတ်ပင်မှု တွေ တတိုင်းပြည်လုံး
မွတ်စလင်တွေကို နေရာဒေသမရွေး ရန်ပြု နေကြတယ်
အာဏာပိုင်တွေက အမှုဆင်ပြီး ဖမ်းဆီးထောင်ချနေကြ
မျိုးချစ်တွေရယ်-မဘသ ဘုန်းကြီးတွေရယ်-ပြည်ထဲရေးရယ်
ရဲ တွေရယ်- စစ်တပ်ရယ်-အစိုးရရယ်. …အားလုံးဟာ
တကျိတ်ထဲ တဥာဏ်ထဲ ပူးပေါင်းပြီး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
တွေကို ခွဲခြား ဖိနှိပ်နေကြတယ်
နယ်တွေမှာမပြောနဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေးလို မြို့ကြီးတွေမှာ
တောင် မွတ်စလင်တွေအတွက် လုံခြုံ မှု မရှိတော့ဘူး
နယ်တွေထဲမှာ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေဟာ
ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မှာ မျိုးညစ်တွေကို အရေးယူ တယ်ဆိုတာကလဲ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ထားတာ
ဆိုတာကို HRW နဲ့ နိုင်ငံခြားသံတမန်တွေ အားလုံးသိတယ်
ဒီအခြေအနေ တွေကို မလေးရှား UNHCR သိစေချင်တယ်
ဘယ်လို သကောင့်သားတွေက သတင်းမှားတွေ ပေးထား
မြန်မာပြည်မှာ မျိုးချစ်အစွန်းရောက်တွေကို အရေးယူနေပါ
ပြီ. …မြန်မာမွတ်စလင်တွေရဲ့ အခြေအနေတွေ ကောင်းနေ
မြန်မာမွတ်စလင်မှန်သမျှကဒ်တွေ သိမ်း/ ရီဂျက်ထုနေတဲ့
မလေးရှား UNHCR ဝန်ထမ်းတွေကို ဦးနှောက်ဆေးပေးဖို့
1952 ခုနှစ် ဂျီနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်းကို မျက်ကွယ်ပြု ပြီး
မမှန်မကန် ဒုက္ခသယ်အဖြစ်လျှောက်ထားသူတွေကို
ဖော်ထုတ် အရေးယူ ငြင်းပယ်တာအတွက် ဘာမှ ပြောစရာ
မှန်မှန်ကန်ကန် စီစစ် လက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်
ရခိုင်ပြည်က ကမန်လူမျိုးတွေနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်တွေ
ပြည်တွင်း ပြသနာဖြစ်တဲ့အရပ်ဒေသတွေက မြန်မာမွတ်စ
လင်တွေ ဒုက္ခသည်အဖြစ် လျှောက်ထားခွင့် မရသေးသူတွေ
အများကြီးရှိနေပါတယ်
မလေးရှား UNHCR ရုံးဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်ဖို့
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အမူ အကျင့်တွေကလဲ ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ်
ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူတွေကို
လူသားတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လျော်ညီတဲ့ ဆက်ဆံမှု
မျိုးတော့ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
ရှိသမျှကွန်ပလိန်းကိုလည်း အထက်အဖွဲ့အစည်းတွေထံ
မပို့ချင်ပါဘူး
ပြုပြင်လိုက်စေချင်ပါတယ်
← ‘Ali AhKao dan Muthu’ goes viral on YouTube
Military affiliated Ma Ba Tha Thug fromagroup of instigators was arrested red-handed while assaulting Myanmar Muslims without any provocation but police just released as if he is insane. →